Microsoft na-ewere Nzọụkwụ Azụ na Outlook 2007 | Martech Zone
Microsoft na-ewere Nzọụkwụ Azụ na Outlook 2007
Thursday, January 11, 2007 Thursday, January 18, 2007 Douglas Karr
Daalụ ndị folks na Ebe n'ihi na nke a isi.
Ọ bụ mkpebi ndị dị ka nke a na-eme ka iju gị anya banyere Microsoft. Na Outlook 2007, Microsoft agaghi enye ntughari ozi email na ihe nchọgharị a. Kama nke ahụ, ha ga-eji Okwu ahụ.
Nke a ga - ebute njedebe ndị a na Outlook:
enweghị nkwado maka onyonyo dị n’azụ (HTML ma ọ bụ CSS)
enweghị nkwado maka ụdị
enweghị nkwado maka Flash, ma ọ bụ plugins ndị ọzọ
enweghị nkwado maka CSS floats
ọ dịghị nkwado maka dochie mgbọ na ihe oyiyi na unordered anatara
enweghị nkwado maka ọnọdụ CSS
enweghị nkwado maka animated gifs
Izu ahia nke email na-eme ka ndi mmadu nweta nkwenye na ike ya na isi. Mkparịta ụka n'etiti ndị na - agụ akwụkwọ nọ na mmiri dị ka 'nnukwu ihe' na - esote site na ihe omume na - akpali na mgbakwunye data data.
Na-arụ ọrụ maka onye na-enye ọrụ email dabere na ikike, ana m atụ anya maka ọhụụ ọhụụ na ndị ahịa email - ohere dị ka Flash na Email, vidiyo na Email, Nkata na Email, ọbụlagodi Ngwa Email bara ụba nke ga-eme ka ndị mmadụ nwee mmekọrịta na ụlọ akụ ha, ha arụ ọrụ, ndị enyi ha, yana ngwa ha n'enweghị nsogbu.
Ọ dị ka Microsoft ga-agbanwe nke ahụ. Microsoft na-achịkwa ahịa email… n'ihi ya, ha nwere ohere iji mekwuo ahụmịhe ndị ahịa n'ezie site na ịmepụta ihe ọhụrụ na ngwaahịa ha. Dịka onye ndu ahịa, ọ bụ ọrụ ha. Kama nke ahụ, ọ dị ka ha esiwo ụzọ dị mfe ma daa ọdịda ahụ.
Ndị a bụ ụdị mkpebi ga-enwerịrị ndị mmepe email ndị ọzọ na-asọpụta. Ọ bụrụ na ịnụbeghị aha ahụ ThunderbirdỊ ga-afọ a!
E nwere ndị nọ na IT nwere ike iche na nke a bụ ngọzi, ikekwe ha na-arịa ọrịa na ike gwụrụ nke ichegbu onwe ha gbasara nsogbu nchekwa metụtara email. Agbanyeghị, ndụ ha nwere ntakịrị ihe siri ike. Typedị mkpebi a na - eme ka ndị ọrụ budata ma wụnye ngwa ndị ọzọ ga- kwado mmekọrịta bara ụba ha na-achọ. Ugbu a IT ga - echegbu onwe gị banyere ihe na - esote na otu esi ejikwa ya.
Otu ihe atụ: Echetara m mgbe ndị IT nọ na otu nnukwu ụlọ ọrụ m rụrụ ọrụ maka mgbakwunye agbakwunyere na email. N'ihi ya, onye ọ bụla nọ na ụlọ ọrụ ahụ gara ma nweta adreesị ozi ọkụ. (Ikpeazụ m nụrụ, nke a ka bụ ikpe na ha).
Microsoft Microsoft. Nwere ike ime nke ọma karịa nke a! Nke a bụ ụdị mkpebi siri ike nke ga-eme ka ọtụtụ iru uju na ndị na-enye ọrụ Email, genlọ ọrụ, Ndị na-ere ahịa… na nke kachasị, ndị ọrụ gị.
Apple ewepụta… a ekwentị. Onwere onye ozo na-ekwo ekwo?
WordPress: Wulite Home peeji nke 3 Nzọụkwụ Dị Mfe
Jenụwarị 11, 2007 na 11:21 PM
Amaara m onwe m na m kwụsịrị iji Outlook dị ka nke ọhụrụ a mbipute na oge thunderbird na-eme n'ime beta gburugburu m ga-elerukwu anya na ya ọzọ; karịsịa nyere mgbakwunye nke mkpado.
Jan 16, 2007 na 10: 22 AM
Naanị ndị na-eche banyere Outlook 2007 na-eji Okwu iji nye ozi ịntanetị ya, na ọnwụ nke atụmatụ ndị a kpọtụrụ aha bụ ndị na-emepụta na ndị nrụpụta. Abụghị ndị ọrụ!
Kedu onye ọrụ kwuru? Achọrọ m inwetakwu ozi ịntanetị ahịa ndị ahụ na-enweghị isi!?.
Gịnị onye ọrụ kwuru? Enwere m ike ịga nnukwu foto maka ozi ịntanetị m !?
Kedu onye ọrụ kwuru? A sị m na m nwere ike ịche ọnụọgụ nke ozi ịntanetị m !?
Ọ bụghị m?
Jan 16, 2007 na 11: 14 AM
Eji m nkwanye ugwu ekwenyeghi na m ma, dabere na afọ data, na ị pere mpe. Ndị ọrụ anaghị enwe ọ spamụ na spam, mana ha na-enwe ọmarịcha ozi ịntanetị na ọdịnaya ha na-achọ. Ndị ahịa m na-arụ ọrụ anaghị enwe ike ịgbanwe ozi email ọ bụla. Emeghere email HTML, pịa, ma gbanwee site na ọnụego na-agbanwe agbanwe.
E kwesịghị iziga ozi ịntanetị na-enweghị isi. Agbanyeghị, izipu email kwesịrị ekwesị yana ọdịnaya ziri ezi na oge kwesịrị nsuso mmeghe, pịa-site na ntụgharị na ozi ịntanetị iji chọpụta ihe uto gị bụ. Anyị na-adụ ndị ahịa anyị ọdụ ka ha ziga obere ozi ịntanetị na obere obere yana ọdịnaya echekwara iji nweta nsonaazụ… ọ na-arụ ọrụ. N'okwu a, nyocha dị oke egwu maka ịchọta data na onye ahịa ma nye ha ihe ha chọrọ.
Kama ịnweta ozi ederede na-enweghị isi, ọ gaghị adị mma ịnweta nyocha na-ajụ ma isiokwu ahụ metụtara gị? Na dabere na azịza ahụ, ụlọ ọrụ ahụ na-aza n'ụzọ kwesịrị ekwesị? Ndị ahịa Outlook 2007 agaghị enwe ahụmịhe ahụ n'ihi ụfọdụ mkpebi nutty na usoro nke iwu.
Ọ dị ọtụtụ dịka ịbanye n'ime ụlọ oriri na ọ yourụ favoriteụ kachasị amasị gị ebe ha maara aha gị, tebụl kachasị amasị gị, na otu ị si eri nri gị. Ha emeghị nke ahụ n’enwetaghị ozi ahụ n’aka gị. Ọ dị iche na web ma ọ bụ email!
Jan 16, 2007 na 11: 38 AM
Ewezuga ọdịdị na mmetụta nke email ahụ, ịnwere ike ịme niile ịhazi ya na ederede. Mana anaghị m atụfu eziokwu ahụ bụ na ndị ọrụ dị ka ozi ịntanetị mara mma, m na-eme. Ihe m na-anwa inweta bụ na ozi ịntanetị bụ akwụkwọ, ọ bụghịkwa ibe weebụ. Ga-enwe ike itinye njikọ dị elu na ozi ịntanetị gị site na WPF \_ E na ihe ndị ọzọ na-abịa. Ndị a niile ga-abụrịrị ndị nweere onwe ha ma nye onye nrụpụta ohere karịa grater karịa html, gụnyere mmekọrịta 3d zuru ezu.
Isi ihe kpatara na e wepụrụ ntụgharị ntụgharị ahụ bụ na enwere grater ịnweta Windows API. Ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla “Nche” igbe interupt a uer ha dị ka likeley ka “OK” ya dị ka ihe ọ bụla.
N'ihi ya, igbochi ọtụtụ mgbakwunye na-enweghị nchebe na ndị ahịa na ọkwa ọkwa. Otú ọ dị, a ga-akpali gị iji gbaa NET ngwa na ihe egwu ahụ dịka ihe NET niile sitere na isi mmalite na-agba ọsọ na igbe ncheta egosipụtara nke gbochiri ịnweta ma ghara igbochi ọdịnaya nke ọdịnaya ahụ.
Kwaga na usoro email email OpenXML bụ isi nchịkwa maka microsoft. Ọ pụtara na a ga-ejikọ usoro ha na ngwaahịa OpenXML ndị ọzọ dịka StarOffice na OpenOffice. Nke a ga - enyere ndị ọrụ aka ịhapụ ndị ahịa ahụ, na ndị ọzọ dịka Outlook Express na Outlook na - enweghị ịkwaga na usoro email ịchọrọ.
Jan 16, 2007 na 11: 40 AM
Nkọwa maka ajọ bekee! Bụrụ m na-arụ ọrụ karịa mkpịsị aka m!
Jenụwarị 16, 2007 na 1:02 PM
Ọ na-abụkarị m dezie ndenye m ugboro abụọ ma ọ bụ atọ mgbe achọtara m njehie m! Enweghị nchekasị.
Isi ihe gị dị oke mma… mana echere m na anyị kwesịrị ịgbagha email dịka naanị usoro njem. Cheedị otú ozi dị egwu pụrụ isi nwee ọrụ na njikọta ọzọ!